शैक्षिक माफियाकरण अन्त्यका लागि पहल गर्छौं - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
शैक्षिक माफियाकरण अन्त्यका लागि पहल गर्छौं	‘नौ वर्षसम्म नेबिसंघलाई विभिन्न बाहनामा कुरुप बनाइयो’
नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको झण्डै दश वर्षपछि भएको महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । दश दिनभन्दा बढी समयको रस्साकस्सीबाट पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष मानिएका नैनसिंह महर नेबिसंघ अध्यक्षमा निर्वाचित भए । संगठनको नेतृत्वमा आएपछि महरले वर्षौदेखि रोगले ग्रसित भएको नेबिसंघको मेजर अप्रेसन भएको बताएका छन् । विभिन्न गुट उपगुटमा विभाजित सबैलाई विद्यार्थीलाई एकतावद्ध गर्दै विद्यार्थी हकहितमा लाग्ने महरले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । संगठनको आन्तरिक विवाद ब्यवस्थापन तथा शैक्षिक एजेण्डाबारेमा नेबिसंघको नवनिर्वाचित अध्यक्ष नैनसिंह महरसँग खबरडबलीका लागि लोकराज जैशीले गरेको कुराकानी ः
महाधिवेशन अगाडिदेखिको नेबिसंघको विवाद महाधिवेशनपछि पनि झनै चुलिएका छन्, भनिन्छ, खास कुरो के हो ?
विवाद, संवाद, समन्वयन हाम्रो प्रजातान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत कुराहरु हुन् । यसलाई धेरै हामीले त्यति ठूलो रुपमा लिएका छैनौं । यद्यपि ९ वर्षसम्म महाधिवेशन नभएको अवस्थामा नेविसंघभित्र केही खराबीहरु निश्चित रुपमा विकसित भएका थिए ।
संगठन रोगले ग्रसित थियो, हामीले त्यसको मेजर अप्रेसन गरेर संगठनलाई चुस्त, दुरुस्त गराउनुपर्ने अवस्था थियो । अप्रेसनपछि सबै फोहरहरु पखालिएका छन् । तसर्थ ठूलो अप्रेसन गर्दा मानिस फेरि होसमा फर्किन्छ कि फर्किदैन ? त्यो कुन अवस्थामा रहन्छ ? भन्ने जस्ता चिन्ता र पीडाहरु भएजस्तै नेविसंघको एघारौं महाधिवेशनमा पनि हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरुमा त्यस्तो प्रकारको समस्या, चिन्ता व्यक्त भएको हो ।
जसले संगठनलाई सशक्त बनाउनु पर्छ भन्ने भाव प्रकट गरेको थियो । सबै साथीहरुका भनाई र मागको सम्बोधन गर्दै अन्तमा हामीले महाधिवेशन सफल गरायौं । बडो निश्पक्ष र धाँधलीरहित तरीकाले, स्वच्छ प्रतिष्पर्धात्मक पद्धतिबाट नयाँ नेतृत्व दिलाएको छ ।
अबको हाम्रो कार्यदिशा भनेको हिजोलाई स्मरण गर्दै, भवियकालागि आवश्यक पर्ने राम्रा कुराहरु अंगाल्दै र पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नुको हामीसँग कुनै विकल्प छैन । संगठनमा यो वा त्यो ढंगका अनावश्यक कुरा उठाएर विवादको सिर्जना कसैले गर्नु हुँदैन, हामी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने संगठनको आधिकारीक धारणा हो ।
मूल पार्टीभित्रको गुटगत भावनाले महाधिवेशनमा लामो समय विवाद चलेको थियो, गुटगत सोँचहरु हावी हुँदा भविष्यमा कस्तो असर पर्छ ?
मेरो विषयमा भन्नु पर्दा म गुटगत कारणले विवादस्पद मानिस होइन । आजसम्म कुनै गुटगत सोँचले पार्टी र संगठनलाई नोक्सान पु¥याउने काममा म संलग्न भएको छैन । सबै साथीहरुलाई मिलाएर लैजाने कुरामा, संगठनलाई सुदृढ बनाउने कुरामा, शैक्षिक एजेन्डाहरुलाई सम्बोधन गर्ने वा लागू गराउने सम्बन्धमा मलाई विद्यार्थी नेता कार्यकर्ता साथीहरुको जेजति साथ सहयोग चाहिन्छ त्यो पाउँछु भन्ने लाग्दछ ।
महाधिवेशनमा पराजित भएका साथीहरुको असन्तुष्टि विधिको सम्मान गर्ने हो भने आफैभित्र समाधान भेटिन्छ । नयाँ निर्वाचित टिमले मात्र नेविसंघको शैक्षिक आन्दोलन अगाडि बढाउँछ, अरुले विवाद र असन्तुष्टिहरु राखेर बस्नुपर्छ भन्ने साेँच गलत हो । म एक्लैले संगठन चलाउने पनि होइन, त्यो त विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्छ । सबै नेविसंघप्रति आस्था विश्वास गर्ने साथीहरुले नयाँ नेतृत्वलाई सहयोग गर्नुपर्छ, त्यो सहयोग पाउँछु भन्नेमा म पूर्णरुपमा विश्वस्त छु ।
साथीहरुको सहयोग नपाएमा नयाँ निर्वाचित टिमले मात्र केही गर्न सक्दैन, लोकतन्त्रमा बहुमतको कदर र अल्पमतको सम्मान गरिन्छ । पराजित भएका साथीहरुको सहयोग संगठनलाई अत्यन्त आवश्यक छ, हामीहरु एक ढिक्का भएर शैक्षिक मुद्धाहरुमा आवाज उठाउँछौ ।
राष्ट्रिय विद्यार्थी राजनीतिमा चिनिएका केहि महत्वपूर्ण नेविसंघका नेताहरु नै पराजित भएको देखिन्छ, यसले संगठनमा अर्थ राख्छ होला नी ?
यसले त्यस्तो खास केही अर्थ राख्दैन् । प्रजातन्त्रमा हारजित भन्ने कुरा स्वभाविक हुन्छ । प्रजातन्त्र भनेपछि आवधिक चुनाव हुन्छ, चुनावमा प्रतिष्पर्धा हुन्छ, यसरी प्रतिष्पर्धामा जाँदा समूहगत रुपमा एलाइन्स बनिहाल्छ, त्यो चुनावको निश्चित समयका लागि मात्र बनेको हुन्छ ।
तसर्थ चुनावमा कुनै एक समूहबाट कुनै पदमा जितेको होलान् भने अर्को पदमा अर्को समूह बाट जितेका पनि होलान् । हारजित भन्ने कुरा चुनावबाट हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरुले नेतृत्वलाई दिएको समर्थनको परिणाम भएकाले यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ । हामीहरुले विधि र प्रक्रियाको सम्मान गर्नै पर्दछ । त्यसको कुनै विकल्प छैन ।
९ वर्षसम्म नेविसंघलाई जसरी विभिन्न बहानामा कुरुप बनाइएको छ, यसलाई सफा गरेर एउटा सुसंगठित, जुझारु र अनुशासित नेविसंघ बनाउने काम नयाँ नेतृत्वले सुरु गरेको छ । हामीले संगठित नेविसंघको भरमा निष्ठावान र बलियो काङ्ग्रेस बनाउने जुन कसम खाएका छौं, नेविसंघ अब त्यो दिशामा अगाडि बढ्छ । त्यसमा संगठनलाई महाधिवेशनबाट पराजित भएका साथीहरुको पनि साथ, सहयोग, सल्लाह चाहिन्छ । संगठनलाई राम्रो गराउने काममा उहाँहरुको पनि कर्तब्य र जिम्मेवारी रहन्छ ।
निर्वाचनबाट फरक गुटका महत्वपूर्ण मानिएका नेताहरु जो पराजित भए उनीहरुलाई संगठनले कस्तो जिम्मेवारी दिन्छ ?
पराजित भएका साथीहरुप्रति संगठन र मेरो पूरा साथ सहयोग र समर्थन रहेको छ । खासगरी मनोजमणि आचार्यले महाधिवेशनमा सम्पन्न गर्ने दौरानमा विवादित कुराहरुलाई मिलाउँदै दुई पक्षीय/त्रिपक्षीय सम्झौताहरु गरेर अगाडि बढाउन सघाउनु भएको हो । उहाँ र म जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी हुँदै केन्द्रीय अध्यक्षसम्म सँगै चुनाव लड्न पाएका हौं । तसर्थ संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा पनि उहाँको साथ, सहयोग र समर्थन मलाई रहन्छ । मैले पनि उहाँसँग लुकाएर संगठन चलाउने कुरा हँुदैन । उहाँको पनि सल्लाह लिएर अगाडि बढाउने सोँचमा छु ।
चुनाव हो, नेविसंघका नेता कार्यकर्ता साथीहरुको मतले कसैलाई जित र कसैलाई पराजित गरेको हो । कुन गुटका कसले जिते भन्दा पनि नेविसंघका नेताहरुले नै जितेका छन्, यो मुख्य कुरो हो । पराजित भएका साथीहरुले नयाँ नेतृत्वको टिमलाई सघाउने र आवश्यक सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चुनावबाट दुई तीन जना पदाधिकारीहरु पराजित र विजेता भइसके पछाडिको अवस्थामा पनि हामी सबै मिलेर नेविसंघबाट एउटा सुनौलो प्रजातन्त्रको अभ्यास देखाउन खोज्दैछौं । त्यो अभ्यास विवाद होइन, संगठनका लागि एकता भन्ने भावले उत्प्रेरित भएर अगाडि बढ्छ ।
उनीहरुलाई संगठनको कुनै ठोस जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन ?
पार्टी र संगठनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका केही जिम्मेवार साथीहरु पनि महाधिवेशनमा पराजित भएका छन्, यो कुरा सत्य हो । उहाँहरु नेविसंघको विधान अनुसार रहेर संठनलाई सहयोग गर्न पनि सक्नु हुन्छ ।
ठोस जिम्मेवारी भनेको पार्टीले व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो । नेविसंघमा रहे मात्र बढी जिम्मेवारी हुने, पार्टीले दिएको अन्य भूमिकामा रहँदा कम जिम्मेवार हुने भन्ने हुँदैन । महाधिवेशनपछि नेविसंघमा उहाँहरुलाई कुनै ठोस जिम्मेवारी दिन सक्ने अवस्था रहँदैन, उहाँहरुलाई पार्टीले उचित जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने लाग्दछ ।
निर्वाचित नयाँ नेतृत्वपंक्तिले विद्यार्थी आन्दोलनको रफ्तार धान्न सक्ला त ?
हिजो राजतन्त्रको विपक्षमा लड्दै गर्दा महिनौ जेल यातना र प्रहरीको कुटपिट सहँदै आन्दोलबाट स्थापित भएका धेरै साथीहरु यतिबेला नेविसंघको नेतृत्वमा आउनु भएको छ । देशका ठूला ठूला परिवर्तनको लागि गरिएका आन्दोलनहरुबाट खारिएको नेतृत्व आज नेविसंघमा आएको छ । देशमा राजनीतिक संकट परेमा परिवर्तनका लागि लड्न सक्ने क्षमताको पनि नयाँ नेतृत्वबाट आशा गर्न सकिन्छ ।
साथै शैक्षिक आन्दोलनमा विभिन्न सुधारका कुरा उठाउँदा संगठनभित्र र बाहिरबाट नेतृत्व गरेका साथीहरुको ठूलो जमात यतिबेला नेविसंघले पाएको हुनाले हामी शैक्षिक मुद्धाहरु पनि नयाँ ढंगले राज्यसँग उठान गर्न सक्छौं भन्ने लाग्छ । हाम्रा मागहरु सम्बोधन गराउन यो नेतृत्व सफल हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास रहेको छ । यसमा सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ ।
तपाइसँग विद्यार्थी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका लागि के कस्ता शैक्षिक एजेन्डाहरु रहेका छन् ?
हामी एसलएसी र उच्च शिक्षामा परीक्षाको रिजल्टको अवस्थाबारे धेरै सोँच्ने गर्दछौ, तर जतिबेला मानिसको ५० प्रतिशत बौद्धिक बृद्धि हुने समय हो, त्यतिबेलाको अवस्थामा कहिल्यै सुधार गर्न लागेका देखिन्नौ । मानिस ५/६ वर्षको भएपछि उसलाई राम्रो वातावरण दिन सकेको खण्डमा त्यसको प्रभाव पछिसम्म पर्ने कुरा बाल विकासले पनि देखाएको छ । राज्यको बालविकासमा लगानी अत्यन्त कम रहेको छ । हामी बालविकासको क्षेत्रमा सुधारको नयाँ आयाम थप्न चाहन्छौं ।
अहिले १ देखि ८ निमावि र १० देखि १२ मावि तह भनिएको छ, हामीले कम्तीमा मावि तह स्कुलस्तरकै भएका हुनाले यसलाई राजनीतिबाट टाढा गर्नुपर्ने विषयमा पनि सोचिराखेका छौं । यस विषयमा अरु विद्यार्थी संगठनका साथीहरुसँग पनि छलफल गर्ने सोँच बनाएको छु ।
त्यसकासाथै नेपालको शिक्षा क्षेत्र माफियाकरण भएको देखिन्छ, हामी त्यसको विरोध गर्छौँ र त्यसको अन्त्यका लागि पहल गर्छौँ । स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको नियमित निर्वाचनका लागि अरु संगठनका साथीहरुसँग छलफल गर्ने र दवाब सिर्जना गर्ने सोँच बनाएको छु ।
नेविसंघको हरेक दुई वर्षमा महाधिवेशन गराउने, प्रादेशिक कमिटी निर्माण गराउने, सातै प्रदेशमा संगठनका कार्यालय खेल्ने काम गर्छौं । सातै प्रदेशमा टिचिङ अस्पताल जस्तै मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ कलेज, कृषि कलेज, र टेक्निकल कलेज स्थापनाको कुरा राज्यसँग माग गर्छौं । जहाँ गरीवका छोराछोरीले पनि पढ्न पाउने व्यवस्था राज्यले प्रदान गरोस् हामी त्यो चाहन्छौं । हामी शिक्षामा भएको निजीकरण अन्त्य, दुव्र्यसनमुक्त शैक्षिक वातावरण, भ्रष्टाचारमुक्त शैक्षिक प्रशासन लगायतका एजेन्डाको कार्यान्वयन गराउन अगाडि बढ्छौं ।
स्ववियू निर्वाचनबाट संगठन कुन स्थानमा आउला ? देशभरीको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
हाम्रो संगठनका कमी, कमजोरी र समस्याहरु भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनको विधिबाट चिरफार गरेर सशक्त गराउने कामको थालनी गरीसकेका छौं । संगठनको अहिले अप्रेसन भएकोले सुस्त गतिमा हिड्दैछ, हामी छिट्टै फिजियोथेरापीद्वारा क्रियाशिल बनाउने अभियानमा लागिरहेका छौ ।
स्ववियू निर्वाचनमा नेविसंघको सबै भन्दा बढी वर्चस्व कायम रहन्छ । किनकि स्ववियू निर्वाचनको मुद्धा हाम्रो हो । हामी स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको निर्वाचनबाटै संगठनमा नयाँ जीवन दिन खोजिरहेका छौं । स्ववियू निर्वाचनमा देशभरीकै संगठनको अवस्थालाई हेर्दा हामी बलियो रुपमा नै उपस्थित हुन सक्छौं भन्ने देखिएको छ ।
भदौ २१ गते, २०७३ - १४:१० मा प्रकाशित